Izindaba - Ulwazi lwensimbi eshisiwe
Eziphothene wire anezikhala ashiselwe yensimbi wire, carbon steel wire.The imbobo anezikhala kuyinto square.Surface ukwelashwa kungaba kagesi lashukumisa, ashisayo bacwilisa lashukumisa futhi PVC camera.The best anti-ukugqwala kuyinto PVC camera ashiselwe wire net.Accaping ashiselwe wire anezikhala, ingafakwa ku ashiselwe wire anezikhala roll futhi ashiselwe wire anezikhala iphaneli.
Izinsimbi zocingo ezishiselwe zisetshenziswa kakhulu embonini, ezolimo, ukuzalanisa, ukwakhiwa, ezokuthutha, ezokumbiwa phansi nezinye izinto ezifana nokuvalelwa komshini, ukuvalwa kwezilwane, ukuvalwa kwembali nokhuni, onogada bamawindi, ukuvalwa kwamaphaseji, amakheji ezinkukhu, obhasikidi bamaqanda namabhasikidi okudla ikhaya nehhovisi, obhasikidi bephepha nemihlobiso
Ngokwesibonelo, PVC camera ashiselwe wire anezikhala is ikakhulukazi lisetshenziswa esitolo amashalofu, umhlobiso endlini nangaphandle, izinkukhu ukulima, izimbali nezihlahla ezicijile, ongaphandle esetshenziselwa villa, zokuhlala endaweni kocingo ukuzihlukanisa, ngemibala egqamile, enhle ophanayo, anti-ukugqwala, do ingapheli, izinzuzo zokumelana ne-ultraviolet, umbala ongawukhetha: okuluhlaza okotshani, utshani obuhlaza okwesibhakabhaka, omnyama, obomvu, ophuzi neminye imibala.
Ikhwalithi yensimbi kagesi yokushisela kagesi inqunywa ubukhulu becingo, ubukhulu bangaphandle nokuthi i-welding iqine kangakanani.
1. Izidingo zamalunga we-solder:
Okokuqala, indawo yokushisela kufanele iqine, ayikwazi ukuba ne-Welding ebonakalayo, i-leakage welding phenomenon.Iphuzu le-Welding aliqinile i-welding mesh enamandla, njenge-iron scrap general.So hlobo luni lwendawo ye-welding, efanelekile nje? Isibonelo, ngoba amabili 3mm kagesi Welding anezikhala, ukuphakama isiyonke double wire superposition kuyinto 6mm. Ngemva Welding, ukuphakama superposition ka double wire Welding iphuzu kufanele kube phakathi 4-5mm.The indawo Welding kuyinto Welding angajulile kakhulu akuyona eqinile, indawo Welding kuyinto ezijulile kakhulu anezikhala ukusekela amandla buthakathaka, kulula ukugqashula.
2. Ukulawulwa kwephutha kocingo lobubanzi:
Iphutha elijwayelekile lobubanzi bezintambo lingaphakathi kwe- ± 0.05mm. Lapho uthenga i-wire wire mesh, ungamane ucabangele ukuthi intengo iphansi kangakanani, kepha zincike kusisindo socezu ngalunye. Ifomula yokubala isisindo ingasetshenziselwa ukunquma ukuthi ngabe iphutha lobubanzi be-wire lingaphakathi kwebanga elifanele.
Iphutha elizwakalayo losayizi wesikrini:
Manje ukukhiqizwa kwe-mesh kukhulu okuzenzakalelayo komshini wokushisela umshini, iphutha libe lincane kakhulu.Ngenxa yokushayisana kwensimbi ngesikhathi sokushisela, kuzoba nokwanda okushisayo nokusikwa okubandayo, futhi ukuphambuka okunengqondo kuqinisekile ukuba khona. Ngokuvamile, iphutha elidayayo liphakathi kokuhlanganisa noma kususwe u-5mm, nephutha lobukhulu lingaphakathi kokuhlanganisa noma lokususa u-2mm.